Ubuntu GoTo Mac???? - MYSTERY ZILLION
မူလ › Member ဆိုင်ရာ › My Article
Ubuntu GoTo Mac????
April 2010 edited April 2010 in My Article
Apple ရဲ့ Mac OS X ကတော့ လူကြိုက်များပြီး ကျော်ကြားတဲ့ Operation system တစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံး သိပြီး ဖြစ်ကြမှာပါ။ လှပသေသပ်ပြီး စွဲဆောင်မှု အပြည့်ရှိတဲ့ သူရဲ့ GUI ကြောင့် အလှအပကြိုက်တဲ့ ကွန်ပျူတာ သမားတွေ အားလုံးကို စွဲလန်း မြတ်နိုးရတဲ့ OS တစ်ခု ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ အခု အသစ်ထွက်လာမဲ့ Ubuntu 10.04 (lucid lynx)ရဲ့ Default Theme မှာတော့ အရင်က သုံးနေကျ အညိုရောင် အစား မရမ်းရောင် ဖျော့ဖျော့ကို သုံးထားပြီး Mac OS X မှ စတိုင်အချို့က သုံးထားပြီး ခက်လန်းလန်း ပုံစံလေးနဲ့ ထုတ်လုပ်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Ubuntu crazy အချို့က နှစ်သက်ကြသလို တစ်ချို့ကလည်း မကြိုက်ကြဘူးလို့ ပြောသံတွေ ကြားနေရပါတယ်။ ကဲ Ubuntu 10.04 မှာ ဘာတွေများ ပြောင်းလဲသွားပြီး ဘာတွေများ Mac OS X နဲ့ ဘယ်နေရာတွေ တူလာတာလည်းဆိုတာကို အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ကြည့်ကြည့်ရအောင်....
သင့်အနေနဲ့လည်း ယခု ထွက်ရှိမဲ့ Ubuntu10.04 က theme လေးကို နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်
မှာ သွားပြီး ဒေါင်းလုပ်ချပြီး သင့်ရဲ့ ယခု Ubuntu မှာ သွင်းပြီး အသင့် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
သင်လည်း ကြိုက်မကြိုက် ပြောခဲ့ပါဦး။
post by- www.ubuntu4mm.org
title bar တွေက buttons တွေ ညာဘက်ကနေ ဘယ်ဘက်ကို ပြောင်းသွားတယ်နော်
boot time ကတော့ အရမ်းမြန်သွားတယ်
9.10 တုန်းက ၁၅ စက္ကန့်လောက်ကြာတယ်
အခု 10.04 မှာတော့ ၁၀ စက္ကန့်လောက်ပဲကြာတော့တယ်
(boot loader စတက်တဲ့အချိန်က စတွက်တာ casing power button ကို စနှိပ်တဲ့အချိန်ကိုတွက်တာမဟုတ်ဘူး
၀င်းဒိုးစ် နဲ့ dual boot တင်ထားလို့)
shut down ကိုတော့ swhich off တဲ့ ဟုတ်ပါမလားလို့ တခြားလှည့်ပတ်ရှာရသေးတယ်
shut down time ကတော့ မထူးဘူး clean installation မှာ ၃ စက္ကန့်ပဲ
package သွင်းတာများသွားရင် Version conflict တွေများလာရင် ၄ စက္ကန့် နဲ့ ၅ စက္ကန့်ကြားပဲ
အဆန်းလေးပဲဗျ alpha လား RC လားဗျ stable ဆိုရင်တော့သုံးချင်တယ်
လောလောဆယ်တော့ Beta2ပဲ ထင်ပါတယ် ( http://releases.ubuntu.com/10.04/ )
ကျွန်တော်တော့ Mac မှာ VMWare Fusion နဲ့ 9.10 တင်ထားတယ်.. ဟိုုနေ့ညကပဲ 10.04 ကို upgrade လုုပ်လိုုက်တယ်.. မဆိုုးပါဘူး.. ကောင်းပါတယ်.. သဘောကျပါတယ်..
FYI, I've writtenapost about it ( http://www.mgpyone.net/2010/04/ubuntu-1004-lucid-lynx.html )
ဟိုရက်က Ubuntu နဲ့ windows နဲ့ dual boot တင်ထားရာက ubuntu မှာ ကလိလွန်သွားပြီး windows ပြောက်သွားတယ်။ အင်တာနက်ချိတ်ရပြီး website တွေဖွင့်မရတော့ဘူး။ ဒာနဲ့ တခြားကွန်ပျူတာကနေ solution ရှာရင်း ကိုစေတန်ရေးထားတဲ့ MBR ပြန်ရေးတဲ့ဟာလေးနဲ့ windows ပြန်တက်အောင် လုပ်လိုက်ရတယ်။ အခုတော့ virtual box နဲ့ပဲ windows ပောှမှာ run တော့မယ်စိတ်ကူးတယ်။ ခဏလေး သုံးလိုက်ရပေမယ့် နောက်ဆုံး version lucid မှာ တောှတောှလေး ကောင်းလာတယ်။
Lucid Lynx stable ကဘယ်တော့လောက်ထွက်မလဲမသိဘူးခင်ဗျာ
April 2010 edited April 2010 Administrators
ဘယ်နှစ်ရက်လဲဆိုတော့ ပြောလိုက်ရင် နောက်ရက်ဖတ်ရင် ရက်လွဲကုန်လိမ့်မယ် သွားသာကြည့်ပေတော့
Ubuntu က Gamer သမားအတွက်ရောအဆင်ပြေသလားမသိဘူး၊အလှအပကြိုက်သူအတွက်စွဲမက်စေလောက်ပါတယ်၊ပြီးတော့ဘယ်ကွန်ပြုတာမဆိုသုံးလို့ရလား၊အခုမှသုံးကြည့်မလို့ပါ
Gamer သမားအတွက် လုံးဝအဆင်မပြေပါ။ ဘယ်ကွန်ပျူတာမဆိုတော့ ရတာများပါတယ် ဒါပေမယ့် Driver တစ်ခါတစ်လေ ရှာမရတဲ့ဒုက္ခလဲရှိပါတယ် ဒီတော့ကိုယ်သုံးနေတဲ့ ကွန်ပျူတာက လူအများသုံးတဲ့တံဆိပ် မဟုတ်ရင် တစ်ခါတစ်လေ Driver ပြဿနာရှိတတ်တယ် အခုနောက်ပိုင်း အဲဒီ့ပြဿနာ နည်းလာပေမယ့် ရှိနေပါသေးတယ်။